Kumuu ahaa Wariye Cawil Daahir Salaad oo maanta argagixisadu dileen.? – Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka & Dalxiiska
Kumuu ahaa Wariye Cawil Daahir Salaad oo maanta argagixisadu dileen.?
By cadde	 On Dec 22, 2018
Allaha u naxariistee Cawil Daahr Salaad oo ka mid ahaa wariyeyaasha ugu caansan Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday qarax gaari loo adeegsaday oo argagixisadu saaka ka geysteen magaalada Muqdisho.
Cawil oo ay la socdeen shaqaale ka tirsan Telefishanka Universal, ayaa qaraxu ku haleelay agagaarka Tiyaatarka Qaranka, waxa uuna ku dhex geeriyooday gaarigii uu la socday.
Allaha u naxariistee Cawil Daahir Salaad waxa uu ahaa saxafiruug caddaa ah oo muddo dheer ku soo jiray shaqada saxaafadda. Waxa uu ka soo shaqeeyay Radio Muqdisho bilowgii mihnaddiisa. Cawil waxa uu sidoo kale ka mid ahaa dadkii bud dhigga u ahaa saxaafadda madaxa bannaan ee dalka ka hana qaadday.
Waxa uu ahaa qoraa ku caan ah sheekooyinka iyo riwaayadaha. Waxaa ka mid ah sheekooyinkii uu qoray sheekadii jaceylka ahayd ee Ambabixii Muqdisho oo lagu daabacay wargeyskii Qaran. Sidoo kale Cawil ayaa allifay sheekadii caanka noqotay ee ” Intey Waayuhu i badeen Waqtigu ha ku baro” taas oo laga soo deyn jiray idaacaddii Horn Afrik Muqdisho.
Cawil waxa uu ahaa barnaamij tabiye caan ah oo qabta doodaha siyaasadda, waxa uuna in muddo ah waday barnaamijka Dood Wadaag oo ka bixi jiray idaacaddii Horn Afrik.Islabarnaamijka Dood Wadaag ayuu ka bilaabay Telefishanka Universal, waxa uuna noqday mid ka mid ah barnaamijyada loogu daawashada badan yahay ee ka baxa telefishannada Soomaalida.
Cawil Daahir waxa uu ka mid ahaa wariyeyaasha Soomaaliyeed ee xirfad yaqaannada ah, sida mas’uuliyadda lehna u tabiyaha arrimaha dalka ka taagan.
Geerida Cawil Daahir waxaa khasaare weyn oo gaaray bahda saxaafadda iyo bulsho weynta Soomaaliyeed.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta,Dhaqanka iyo Dalxiiska Daahir Maxamuud Geelle, ayaa tacsi u diray ehelada iyo asxaabta wariye Cawil Daahir Salaad oo isaga iyo 3 ka tirsan shaqaalaha Universal ay saaka ka mid noqdeen dad Soomaaliyeed oo argagixisadu saaka ku laayeen Muqdisho.
Wasiirka ayaa yiri ” Cawil Daahir waxa uu ka mid ahaa udub dhexaadka saxaafadda Soomaaliyeed, waxa uuna ahaa wariye edeb badan oo xirfad yaqaan” Waxa uu intaas ku daray wasiir Geelle ” Waxaan tiiraanyada la qeybsanayaa ehelkiisa, asxaabtiisii shaqada, saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo Shacabka Soomaaliyeed ee uu u adeegayay”.
Bahda Warbaahinta Qaranka ayaa iyaguna tacsi tiiraanyo u diray ehelada Cawil iyo shaqaalihii la geeriyooday.
Agaasimaha Telefishanka Qaranka Liibaan Cabdi Cali, ayaa geerida Cawil Daahir Salaad ku tilmaamay mid xanuun badan,isagoo tilmaamay in uu banneeyay boos weyn oo ay buuxintiisu adkaan doonto.
” Waxa uu Cawil tusaale u ahaa wariye dhiirran oo yaqaan waxa uu ka shaqeynayo farriinta ay saxaafaddu u taagan tahay”.
Ilaahey ha u raxmado Cawil Daahir Salaad, carruurtii, ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna sabar iyo iimaan ha ku irzaaqo.
Wasiirka warfaafinta oo ka Tacsiyeeyay geerida Cawil Daahir iyo Shacabkii kale ee ku dhintay qaraxyadii Maanta.
Golaha Shacabka oo Ansixiyey Miisaaniyadda Dowladda ee 2019-ka.